FIFA oo ka hadashay geeridii maanta ee Siciid Mugambo & Yabarow Wiish – SBC
FIFA oo ka hadashay geeridii maanta ee Siciid Mugambo & Yabarow Wiish
Posted by editor on Apriil 4, 2012 Comments
Xiriirka ciyaaraha kubada cagta aduunka ee magaciisa loo soo gaabiyo FIFA ayaa ku tilmaamay arin murug iyo naxdin huwan geeridii Gudoomiyihii xiriirka kubada cagta Somaaliyeed (SFA) Siciid Maxamed Nuur (Siciid Mugambo) iyo Madaxweynihii gudiga Olympic-da Soomaaliyeed Aadan Xaaji Yabarow Wiish.
Madaxweynaha FIFA Sepp Blatter oo soo saaray warsaxafaadeed arinkan ku aadan ayaa wuxuu muujiyey sida uu uga murugoonayo geerida madaxdii Sports-ka Soomaaliyeed kuwaasi oo ku dhintey qaraxii ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta Tiyaartarka qaranka.
“Aad ayaan uga murugooday markii aan maqlay weerarka maanta dhacay Muqdisho ee galaaftey nolasha tiro dad ah oo ay ka mid ahaayeen Madaxweynihii xiriirka kubada cagta Soomaaliyeed Siciid Maxamed Nuur & Madaxweynihii Gudiga Olympic-da Soomaaliyeed Aden Yabarow Wiish” ayuu ku yiri warsaxaafadeedkiisa Sepp Blatter .
“Labada ninba si shakhsi ah ayaan u garanayey, waxaana ku tilmaami karaa wax wanaagsan hawshii aan hagrashada laheyn ee ay ugu jireen kor u qaadida Spors-ka dalkooda,si qoto dheer ayaa loo dareemi doonnaa” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Sepp Blatter.
“Xiligan muragada leh, waxay la jirtaa tacsideyda, tan FIFA & midda dhamaan bahda kubada cagta dunida meel kasta oo ay ka joogaan qoysaskii dadkii la jeclaa ee nolashooda ku waayey weerarkaasi & guud ahaan bahda kubada cagta Soomaaliyeed” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Madaxweynaha FIFA Sepp Blatter.
Warbixinta FIFA waxaa lagu xaqiijiyey in labada sarkaal ay dhawaan bilaabeen dib u dhiska iyo dayactirka garoonka qaranka ee kubada cagta eemagaalada Muqdisho.
Warbixintan oo lagu qoray website-ka FIFA halkan ka akhri